Guddiga Doorashooyinka Qaran oo Muqdisho Kula Kulmay Xisbiyada KMG u Diiwaangashan? – Goobjoog News
Guddiga Madaxabanaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay Xisbiyada sida ku meel gaarka ah u diwaangashan ee ka jira dalka.
Kulanka oo u jeedadiisa ahayd is xog waraysi u dhaxeeyo labada dhinac ayaa diiradda lagu saaray sidii xisbiyada hadda jira ay u qaadan lahayeen Shahadada radmiga ah.
Gudoomiyaha Guddiga Madaxabanaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliima Ismaaciil ayaa furtay kulanka iyadoo ku dheeratay hawlaha Guddiga ee ku aaddan Xisbiyada sida KMG u diiwaangashan, Gudoomiye Xaliima ayaa ka sheekaysay sida ay ugu dedaaleen in la helo Sharciga xisbiyada iyo shuruucda kale ee la xariirta doorashada iyadoo hay’adaha ku shaqada leh aan kaga harin marnaba sidii loo heli lahaa shuruucdaas.
Sidoo kale Gudoomiye Xaliima ayaa ka codsatay in Xsbiyadu ay dhankooda muujiyaan isku duubni ku aadan in dalkaanu uu ka baxo doorashooyinka dadban, iyadoo sidoo kale ka dhawaajisay in Soomaaliya ay 50 sano ka hor ay ka dhacday doorasho qof iyo cod ah iyadoo intaan ka qibrad yar.
Ugu danbayn Xisbiyada ka soo qaybgalay kulanka ayaa su’aala waydiiyay Guddiga Madaxabanaan ee Doorashooyinka Qaranka iyadoo Komishineerada Guddiga ay kaga jawaabeen su’aalaihii la waydiya.